Ciidamada xooga Soomaaliya oo sheegay inay isku fureen wadada xiriirisa gobolada Banaadir iyo shabeelada hoose. – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidamada xooga Soomaaliya oo sheegay inay isku fureen wadada xiriirisa gobolada Banaadir iyo shabeelada hoose.
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ayaa Sheegay inay xoogaga Alshabaab ka saareen deegaanada ku teedsan wadada isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Marka gaar ahaan deegaanad Gandershe, Dhannaane, Jillib Marka iyo deegaano kale oo ay horay ay AL-shabaab ugu sugnaayeen.
Abaanduullaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya Sarreeye guuto Odowaa Yuusuf Raagge oo la hadlay idaacada codka Ciidamada qalabka sida ku hadashay sidoo kalena isagu ciidamada Howlgalka fuliyey hoggaaminayey, ayaa sheegay inay wax lagu farxo tahay in Muddo dheer kadib Shacabka Soomaaliyeed laga dulqaaday waxa uu ugu yeeraykooxo ku dhibaatayn jiray Wadada Xeebta ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Marka.
Gen. Odowaa ayaa tilmaamay in qorshaha Taliska Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya uu yahay sidii Alshabaab looga saari lahaa dhammaan goobaha ay ku sugan yihiin.
Dagaalameyaasha Alshabaab ayaa la sheegaa inay dadka isticmaala wadadaasi u geystaan dhibaatooyin kala duwan waxaaana marar badan soo baxayay cabasho laga muujinayo amaanka wadada dheer ee xixiirisa Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo magaalada Marka ee gobolka shabeelada Hoose.
← DHAGEYSO warka Duhurnimo ee idaacada star fm 1:30 PM
DHACDO YAAB LEH: Skuul ardayda dhigatada ku qasbay inay baskiiladooda u soo yeelaan taargo. →
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR FM 1.30PM 18.1.2019 January 18, 2019
Xildhibaanka galbeedka Wajeer oo xilkiisi waayay January 18, 2019
Ganacsatada iyo madaxda xaafadda islii oo cambaareeyay weerarkii Dusit January 18, 2019
Gudiga tiro koobka hantida dadweynaha ee Puntland oo la magacaabay. January 18, 2019
Puntland oo shaacisay tirada dadka Qaxootiga ee deeganadeeda gaadhay sanadkii hore. January 18, 2019
Dab xalay ka kacay Suuq ku yaala Afgooye oo qasaare uu ka dhashay. January 18, 2019
Itoobiya oo fursado badan u ogolaaneysa qaxootiga January 18, 2019
Midowga Afrika oo ku baaqay in dib loo dhigo natiijada kama dambeyska ee DRC January 18, 2019
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka oo difaacay xulashada Khawar Qureshi January 18, 2019
Hay’adda laanqeerta cas oo sheegtay in la helay dhammaan dadkii la raadinayay kadib weerarkii Dusit January 18, 2019
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR FM 1.30PM 18.1.2019
Xildhibaanka galbeedka Wajeer oo xilkiisi waayay
Ganacsatada iyo madaxda xaafadda islii oo cambaareeyay weerarkii Dusit
Gudiga tiro koobka hantida dadweynaha ee Puntland oo la magacaabay.
Puntland oo shaacisay tirada dadka Qaxootiga ee deeganadeeda gaadhay sanadkii hore.
Dab xalay ka kacay Suuq ku yaala Afgooye oo qasaare uu ka dhashay.
Midowga Afrika oo ku baaqay in dib loo dhigo natiijada kama dambeyska ee DRC
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka oo difaacay xulashada Khawar Qureshi
Hay’adda laanqeerta cas oo sheegtay in la helay dhammaan dadkii la raadinayay kadib weerarkii Dusit